Forgotten Dhammarcariya University - YouTube JP
Forgotten Dhammarcariya University
ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု·370 videosSubscribeSubscribedUnsubscribe 457 Subscription preferences
Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု's video.
Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု's video.
Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု's video to your playlist.
http://dhammadownload.com/dhammadownl...ပုဂံမြို့ဟောင်းတနေရာမှာ ဆိုတဲ့ ပုံပြင်မဟုတ်ပါ။ ဒဂုံမြို့သစ် တနေရာမှာရှိတဲ့ လူသူမနီး မြွေများပေါများတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်ခေါင်ခေါင်ရှိ ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်တွင် ယ္ခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေကြားမှာ ရုန်းကန်နေကြရတဲ့ အလိုတော်ပြည့် ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ် နာယကချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ (၆-၁-၂၀၁၂) သောကြာနေ့ တွင် ဟောကြားတော်မူသော ဗုဒ္ဓအသက် ဘယ်သူဆက်သလဲ တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။ နာဖြစ်အောင် နာကြည့်ကြပါ... ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်ကြီးဟာ အပေါ်ရံကြည့်ရင် အဆင်ပြေနေသလိုပါဘဲ.. ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ် ဆိုတဲ့ နာမည်ဆိုတော့ အစိုးရက အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့တက္ကသိုလ်.. လူတွေအများကြီးက အထောက်အပံ့ ပေးထားတဲ့ တက္ကသိုလ် လို့ ထင်ကောင်း ထင်ကြပါလိမ့်မယ်.. အမှန်တကယ်မှာတော့ သံဃာတော်တွေကို စာဘဲ သင်တတ်တဲ့ ဆရာတော် ဦးသုစိတ္တ - (ကိုယ်တော်တိုင်)- ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ရပ်တည်နေရတဲ့ ကျောင်းတခုပါ.. လူမသိ သူမသိ လယ်ကွင်းခေါင်ခေါင်မှာ သံဃာနဲ့ဘဲ အဆက်အဆံရှိပြီး လူတွေနဲ့ ထိတွေမှု အင်အာနည်းတဲ့ စာသင်တိုက် တခုရဲ့ နေ့စဉ် စားဝတ်နေရေးဟာ တော်တော် ခက်ခဲလှပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် သံဃာအတွက်သာ စာသင်တတ်ပြီး လူတွေကို ဟောပြောမှုနဲပါးတဲ့ ဆရာတော်၏ ရင်ဖွင့်သံ - သဒ္ဒါတရားထက်သန်ကြတဲ့ ဓမ္မမ်ိတ်ဆွေတွေ ကြားနိုင်ကြပါစေ၊ စိတ်ဝင်စားသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ဆက်သွယ်လှုဒါန်းရန်။-----------------------စင်္ကာပူ - ဦးကျော်လွင် (၆၅) ၉၇၃၆၅၀၃၄ မဆွေဆွေကြိုင် (၆၅) ၉၇၃၆၃၅၅၄မလှလှဝင်း (၆၅) ၉၆၆၉၅၇၇၄ လှုဒါန်းရန်။----------စင်္ကာပူမှ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည် အောက်ပါ အကောင့်သို့ လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်.DBS Saving Plus ၀၇၀-၀-၀၁၂၂၅၇အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာများတွင်ရှိကြကုန်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့သည်..Paypal အကောင့် ( kyawlwin2000@gmail.com )ထဲသို့ တိုက်ရိုက် send money ဖြင့်လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်...အလှုငွေလွှဲပြီးပါက dhammadownload.admin@gmail.com သို့ ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်အလှုတော် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလှုရှင် အမည် အပြည့်အစုံနှင့် လှုဒါန်းသည့် ငွေပမာဏကို email ပို့ပေးပါရန်။ကျောင်း လိပ်စာ။-----------------အလိုတော်ပြည့် - ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်စစ်တောင်းလမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊(၀၉)၅၀၅၁၁၉၄(၀၉)၈၅၁၀၂၇၁(၀၁)၅၉၀၅၃၄ http://dhammadownload.com/dhammadownl...
စာသင်သား တပါးသည် ဓမ္မာစရိယ ကျမ်း ၃ကျမ်းစလုံးအောင်မြင်ရန်﻿ ဥာဏ်အကောင်းဆုံး၊ အမြန်ဆုံး ၁နှစ်မှ အနှေးဆုံး ၄နှစ်၊ ပျှမ်းမျှ ၃ နှစ် ခန့် အချိန်ယူရပါသည်။
Sign in with your YouTube Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to rate ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု's comment.
in reply to ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု
ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ အလွယ်တကူ အာရုံပြု﻿ လှုဒါန်းနိုင်ရန် အထက်ပါ စရိတ်များကို တဦး၊ တယောက်၊ တနိုင်စာ ဖြစ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် တွက်ချက် ကြည့်ပါသည်..
သံဃာတွေကို အခမဲ့ စာသင်သည့်﻿ စာသင်တိုက်ဖြစ်သည့်အတွက် ဝင်ငွေ ကတော့ မရှိပါ .. ထွက်ငွေမျှသာ ရှိပါသည်..
မပြဲရန် တာဝန်ယူ၍ ငှားရမ်း အသုံးပြုရပါသည်။ စာမေးပွဲအောင်ပြီးလျှင်﻿ စာအုပ်ကို Library သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရပါသည်။ စာသင်သားများမှတ်စုရေးရန် စာအုပ်၊ စာရေးကရိယာများကို သက်သာစေရန် အနီးအနားရပ်ကွက်မှအစိုးရစာသင်ကေ­ျာင်းများမှ သူတို့၏ ကျောင်းသားကိုယ်တာများထဲမှ အနည်းငယ်စီ မျှဝေကြသဖြင့် စာအုပ်ဖိုး အနဲငယ် သက်သာရာ ရပါသည်။
စာသင်သားများ၏ သင်္ကန်း အတွက်ကတော့ အဆင်ပြေပါသည်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဓလေ့ အရ၊ ကျောင်းတွင် ဝါဆိုတခါ၊ ကထိန် တခါ၊ ဆရာတော်မွေးနေ့တခါ ပွဲ ၃ပွဲ ကျင်းပလျှင် စာသင်သားများ တပါးလျှင် သင်္ကန်း ၃စုံခန့် ရနိုင်ပါသည်။ Reply ·
ထိုအတွက် ဆီဘိုး ထပ်မံကုန်ကျပါသည်။ မီးစက်၊ ရေစက်အတွက် လစဉ် ၂သိန်းခန့် ကုန်ကျပါသည်။
ကျောင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထပ်မံ﻿ မတိုးတက်အောင်..ကျောင်းနေ FUll Time သံဃာ ၂၀၀ မှ အပ၊ Part Time ဖြစ် ပြင်ပမှ လာရောက်သော စာသင်သားများကို ကျောင်းတွင် ဆွမ်း မကြွေးနိုင်ပါ၊ ချိုးရေ၊ သုံးရေများကို အသုံးပြုခွင့် မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။
စာသင်သားများ ကို စာအုပ်များကိုလဲ အခမဲ့ မထောက်ပံ့နိုင်ပါ။ စာအုပ်ဘိုး သက်သာစေရန်၊ ဓမ္မာစရိယ စာသင်သားများ၏ ကျမ်း စာအုပ်များကို Library မှာ ငှားရမ်း ပေးပါသည်။ စာအုပ်တွင် မှတ်ချက် မရေးရန်၊ မစုပ် မပြဲရန် Reply ·
အပါး ၂၀၀ ခန့်ကို ရပ်ကွက်များ ခွဲတန်းချကာ နေ့စဉ် ဆွမ်းခံ ထွက်ရပါသည်။
ကားများကို နေ့စဉ် ငှားရမ်းခစရိတ်ကြီးမားသဖြင့် အလှုရှင်တဦးမှလည်းကောင်း၊ အလှုရှင်အများ စုပေါင်း၍ လည်းကောင်း သံဃာ ၆၅ပါး ခန့် ဝင်ဆန့်သည့် BUS ကား ၂စီး ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့သဖြင့် နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ် အနဲငယ် သက်သာခဲ့ပါသည်။ သို့သော် နောက်ထပ် BUS တစီး နေ့စဉ်﻿ ငှားရမ်း ရပါသေးသည်။
ထိုကားများအတွက် လစဉ် ဆီ ၁၈၀ ဂါလံခန့် ကုန်ကျပါသည်။ ထိုအတွက် လစဉ် ၇ သိန်းခန့် ကုန်ကျပါသည်။ ကျောင်းမှာ မီးပျက်လျှင် စာသင်သားများ စာကျက်နိုင်ရန် မီးစက်များ အသုံးပြုရပါသည်။ Reply ·
ထိုသို့ ရဟန်းပျိုများ ဖြစ်သည့်အလျှောက် စားနိုင် သောက်နိုင်ကြသော အရွယ်များ ဖြစ်ကြ သဖြင့် တခြားသောအလှုများတွင် စီစဉ်သော ငါးယောက်စာ အစားအသောက်ကို ဤစာသင်တိုက်တွင် ၃ ယောက်စာနှုန်းနှင့် တွက်ရလေ့ ရှိပါသည်။) အထက်ပါ﻿ စရိတ်သည် တကြိမ်တခါ လှုလေ့ ရှိသော မွေးနေ့ အလှုရှင်၊ မင်္ဂလာဆောင်အလှုရှင်တို့ အတွက် Guide Line ပေးသောတွက်ချက်မှု ဖြစ်ပါသည်။
စာသင်သား သံဃာတော်များ နေ့စဉ် အသက်ဆက် ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက် ဆွမ်းခံထွက်ရပါသည်။ စာသင်တိုက်သည် လူနေရပ်ကွက်များဖြင့် ဝေးလှသဖြင့် လူနေရပ်ကွက်အထိရောက်အောင် ကားများဖြင့် သံဃားတော် အပါး
နေ့လည် ဆွမ်းကျွေး မည်ဆိုပါက သံဃာတပါးလျှင် ကျပ်﻿ ၂ ထောင် ခန့် ကုန်ကျပါသည်။ တကျောင်းလုံးစာ သံဃာ ၂၀၀ ဆိုပါက ကျပ် ၄ သိန်းခန့် ကုန်ကျပါသည်။ (မှတ်ချက်။ စာသင်သားများသည် ရဟန်းပျိုများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အသက်အရွယ်အားဖြင့် အငယ်ဆုံး ၁၇နှစ်မှ အကြီးဆုံးမှာ ၃၂ နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ Reply ·
ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်သည် တနှစ်လျှင် စာသင်သား သံဃာတော် ၂၁၇ ခန့်မျှ စာရင်း လက်ခံပါသည်။ ရည်ရှည်တွင် Long Term သံဃာတော် ၂၀၀ ခန့် ကျန်ပါသည်။ ၁၇ ပါး ခန့်လောက် အပြောင်းအလဲ ရှိတတ်ပါသည်။ ထို့အတွက်﻿ တနှစ်စာ တွက်လျှင် သံဃာ အပါး ၂၀၀ ဖြင့် တွက်ချက် တင်ပြပါမည်။
ဆရာတော် အရှင် ဇဝန မြေဇင်းတောရby ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု 1,304 views
Bhaddanta-Thuseiltha-Vivamsa-DhammarcariyaUniversity-1day-activities.mpgby ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု 672 views
အရှင်ဆန္ဒာဓိကby ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု 1,757 views
ဘဒ္ဒန္တသုစိတ္တာဘိဝံသ 12-1-2012by ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု 332 views
Bhaddanta Thuseiltha Vivamsa 12 1 2012 Ceremony for 95monks who pass DhammaracariyaExamby ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု 148 views
နွေအလွမ်းby pyomaunggyi P.M.G 429 views
နိရောဓသစ္စာအနက်၎ချက်by Maung Lwin 181 views
မေတ္တာ ဘာဝနာ တရားတော်by Maung Lwin 121 views
နွေ - ဗစ်တာခင်ညိုby Ko Kyaw Oo 5,361 views
Sand Paintingby ann1991nc 3,122,167 views
Bryan Adams - Heaven - Acoustic Liveby Bryan Adams 13,996,987 views
X Factor : Connie Talbot 2012 performance ( Live )by UniversalMusicSwag 8,478,203 views
Laura Pausini: Without You (with lyrics)by all4lovelywomen 2,581,058 views
Настя Петрик "О дорогая"by SvetRim 4,682,680 views
Ko Thar Noe & Burmese Languageby voaclips 80,074 views
Талант. Незрячая девушка из Полтавыby vvoronenko 7,163,895 views
forgotten (the gathering)by rené rutten 137,171 views
[Eng Sub] Crazy little thing called love OST - Somedayby xxRoGeLynxx 1,612,229 views
Breathless - Shayne Wardby Linda Sol 5,129,861 views
Laura Pausini-It's not goodbyeby marthitto 2,803,615 views